waxaa magaalada boosaaso lagu dilay Col. Xasan Shire Amaan oo ahaa taliyaha ciidanka Garoonka diyaadaha ee Bosaso – STAR FM SOMALIA
Waxaa maanta lagu diley magaalada Bosaso Col. Xasan Shire Amaan oo ahaa taliyaha ciidanka Garoonka diyaadaha ee Bosaso dilka waxaa geystey mid ka mid ah ciidanka ilaalada ee Garoonka diyaaradaha.
Wararku waxay sheegayaan in askeriga dilka geystey uu baxsadey, Askeriga ayaa la sheegayaa in uu ka mid ahaa ciidanka Garoonka, ma cadda in uu wax xiriir ah la lee yahay ururo kale iyo sababta rasmiga ah ee uu u diley Col. Xasan Shire.
Col. Xasan Shire Amaan ayaan lahayn wax ilaalo ah oo u gaar ah, waxaana uu magaalada ku dhexmari jirey isaga oo aan wax ilaalo ah la socon oo keligiis ah.
Waxaa magaalada ka socda baaritaan weyn, ciidamada ilaalada kontroolka Bosaso ayaa baaritaan ku haya gawaarida, waxaana lagu raadjoogaa askerigii dilkan geystey ee baxsadka ah.
Col. Xasan Shire Amaaan, ayaa xilkan soo hayey tan iyo sanadkii 2003.